PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: အကြမ်းဖက်အထိကရုံန်း လက်သယ် ဘယ်သူလဲ? ဖေါ်လိုက်ပြီ...
အကြမ်းဖက်အထိကရုံန်း လက်သယ် ဘယ်သူလဲ? ဖေါ်လိုက်ပြီ...
သား ၃ ယောက်တွင် ၂ ယောက်သည် မဟာဘောဂ စီးပွါးရေးသမားကြီးများဖြစ်ပြီး အငယ်ဆုံးသား ဖြစ်သူကတော့ ဘိုတော်ရောဂါထကာ အင်းအစီရင် ယာတြာနှင့် အဂိရ ဖိုထိုးခြင်းများ ပြုလုပ်လေ၏။ ၄င်း၏ အ၈္ဂိရ ဖိုထိုးသော ဒေသများသည် ယခု နေပြည်တော် မတည်ကပင် သွားရောက်စခန်းဝင်လေ့ ရှိခဲ့သော လယ်ဝေး ပျဉ်းမနား၏ အနောက်ဘက် တောင်တန်း တောတန်းများတွင် အများဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။
အမှန်တင်ပြရသော မိထ္တီလာမြို့သို့ ဇန်နာဝရီလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ဦးသန်းရွှေ၏ ဒုတိယသမီး ရောက်ခဲ့သည်။ သူမ မိထ္တီလာသို့ ရောက်သော အချိန်သည် ည ၉ နာရီခန့်ရှိပြီး မိတ္ထီလာ တပ်မတော်သားများမှ အကြီးကအကျယ်လုံခြုံရေးယူပေးခဲ့ရပြီး မိထ္တီလာမြို့အား အသေခြာ ပတ်ပတ်လည် နှစ်ခေါက်တိတိ လှည့်ပတ်ကြည့်ရှု့သည်။ ဦးသန်းရွှေ၏ သမီးနှစ်က မိထ္တီလာမြို့၏ အချက်ခြာကျသော နေရာများအား လက်ညိုးထိုးပြသည်ဟုဆိုသည်။
၄င်းတို့တွင် ကြီးမားသော စီမံကိန်းကြီးတရပ် အကောင်ထည်ဖေါ်ရန် အစီစဉ်ရှိခဲ့ကြသည်။ မိတ္ထီလာ သည် မန္တလေးထက်ပင် အချက်ခြာကျသော နေရာဟု နေပြည်တော် စီပွါးရေးသမားခရိုနီများက သွားရည်ကျနေသည်မှာ ကြာလေပြီ၊ မိတ္ထီလာသည် မိုးအလွန်ခေါင်သော နေရာမျိုး မဟုတ်ပဲ စီးပွါးရေးဇုန်ကြီးတခု အတွက် အသင့်တော်ဆုံးဟု ဆုံးဖြတ်ကြသည်။ မိတ္ထီလာတွင် တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့ကြီးများ အခြေခြရာဖြစ်ပြီး လက်နက်ကိုင် တပ်ရင်းများနှင့် ဆေးဘက် စစ်ပစ္စည်းဘက် ထောက်ပို့ရေး အပါဝင် တပ်ရင်းဌာနပေါင်း ၁၅ ခုရှိသောမြို့လဲဖြစ်ပြီး တပ်မတော် အရာ၇ှိကြီးများအဖို့ စီးပွါးရေး စစ်ရေး များအတွက်လဲ အလွန်အရေးပါကြောင်း မှတ်ချက်ချပြီး တပ်ချုပ်ဟောင်းကြီး သမီးမြှ ဇန်နာ၀၇ီလ ၁၁ ရက်နေ့ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၁ နာ၇ီတွင် နေပြည်တော်သို့ ပြန်သွားခဲ့သည်။
၄င်းတို့ဌာနများနှင့် တပ်သားသစ်များအာ ညအချိန် ခရာမှုတ်ကာ လူစုပြီး ကုမ္မဏီများပိုင်သော မြေသယ်ကားကြီးများဖြင့် ခေါ်ဆောင်လာပြီး အလျှင်မြန်ဖျက်ဆီစေသော သတင်းမှာ အပြင်သို့ ပေါက်ထွက်ေ၇ာက်ရှိလာခြင်း မရှိသေးကြောင်း တင်ပြရင်း အကြမ်းဖက်အထိရုံန်း လက်သယ်ဘယ်သူလဲ? ဖေါ်လိုက်ပြီ ဆောင်းပါးအား အသေခြာ ဖတ်ရှု့ပါက ရှင်းလင်းစွာ တွေ့မြင်နိုင်ပါကြောင် ကျေးဇူး တင်ပါသည်။
မှတ်ချက် ( မည်သည့် ဘာသာရေစးဘက်မှ မိမိအနေဖြင့် လိုက်ကာ တင်ပြထားခြင်းမဟုတ်ပဲ မိမိရရှိခဲ့သော သတင်းအချက်လက် မှတ်တမ်းများ နှင့် ၀ိုင်းဝန်းကူညီ ဘက်မလိုက်ပဲ ပံ့ပိုးပေးခဲ့သူများ၏ အကူညီများဖြင့် တိကျစွာ တင်ပြခဲ့ကြောင်း ၀န်ခံပါသည်) စာဖတ်သူအပေါင်း စစ်ဘီလူးများ ဖန်တီးလှည့်ပြားသော ဘေးအန္တရယ် လှည့်ကွက် အသွယ်သွယ်မှ ကင်းဝေနိုင်ကြပါစေ။
Minmaha Bagan(FB) သတင်းစာမျက်နှာမှ